DEG-DEG: Suuqa Bakaaraha oo Saakay uu ka Kacay Dab aad u Xoogan iyo Demintiisa oo maaro loo la'yahay (VIDEO)
DEG-DEG: Suuqa Bakaaraha oo Saakay uu ka Kacay Dab aad u Xoogan iyo Demintiisa oo maaro loo la’yahay (VIDEO)
February 27, 2017 – Wararka inaga soo garaya suuqa ugu weyn ee ganacsiga Soomaaliya ee (Suuqa Bakaaraha) ayaa sheegaya in saakay aroortii hore uu halkaasi ka bilaawday dab aad u xoogan oo ila iyo hadda loo maaro la’yahay demintiisa.
Dabkan xoogan oo aanan ilaa iyo hadda la’ogayn sidii uu ku bilaawday, ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan, waxana wararka qaar ay sheegayaan in koronto uu ka dhashay dabkaasi, waxa uuna dabku ka bilaawday agagaarka halka loo yaqaan suuqa cusub ee Khaliifa.
Suuqa Khaliifa ee ku dhex yaala Suuqa Bakaaraha gudihiisa ayaa la sheegay inuu gebi ahaanba gubtay, waxa uuna dabku wali yahay mid kusii faafaya qeybo badan oo kamid ah Suuqa Bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqana Sarifka.
Gaadiidka dab damiska Gobolka Banaadir iyo gaadiidka Shirkada Hormuud ee dab damiska ayaa ka qayb qaadanaya daminta dabkaasi xoogan ee ka socda Suuqa Bakaaraha.
Wixii SAWIRRO ama VIDEO ah ee soo kordha kala soco halkan